Ishii Quruxda ka Dheregtey - Hoygamaansada
by Axmed Shiikh Jaamac
Gugu waa Ballaadhane, Meeshu waa ballida Hawd Burco meel galbeed ka ah, Bancawl geeddi iyo laba Bogox looga sii kaco Bidixna loo janjeedhsado. Barni weeye gabadhuna Ma badnoo da'deeduna Tobankii u buuxsamay Toddobadi ku biirtiyo Bilo raacay weeyaan. Waa bilan tagoog dheer Bilicsanoo la jecelyahay. Deegaanku bari xalay; Billowgii horreetaba Idahaa baraarugay Una baaqay naylaha, Barni way maqleysoo Waabberi bay toostoo Bisinkiyo baryo Alley Ku balleeysay subaxoo. Baftadeedi xidhatoo Beerkey ku laashoo Ma laallaadin boqorkii Waxay hawl ku baahdaba, Haddan oo barqa ah dheer Barni waxay dhex joogtaa Bulshaweynta dooxada, Halka rahu ka bu'ayoo Buuqa isku darayoo Shimbiruhu bulxamayaan Biyo muguca weeyaan, Adhyii oo barqaday baa Berrimada is wada wadhay Oo dharag bastood la ah, Lo'dii baa bannaaxiyi, Fardo baydda togayaa Baarkiyo qanaantiyo Bulkiyo saynta wada ridi, Barbaarta geela jirataa Bardooddiyeysa orodkoo Bowdyo muruqyo adag iyo Booddada libaaxa leh, Baad jilicsan iyo doog, Bar cuddoon nirgaha seexdoo Isbarkaday dhammaanoo Bulbusha kurusyada Neecowdu baalbaashoo, Markay ‘buuc' yiraahdaan Ramag baasha dhow iyo Barbarrada ka joogaa Baaca dheer tusaayoo Bogga uga dunuunuci, Baarqabkuna ilaaliyo Bidhaan eegid uu yahay Gaadiidka baayiray Owraha baruurtiyo Baaxaddiyo laxaadka leh Oo boodh iyo gelgelin tegeyoo Ku baduugay raamsiga, Barni daawashiyo qurux Way bogatay maantaas.